မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ အပေါ်ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပါသည် 14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018. တဦးတည်း Valentine Day ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် 2018 ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူကျင်းပသောမှာတစ်ရက်အဖြစ် ချစ်သူများနေ့ ကတ်များ ချစ်သူများနေ့ လက်ဆောင်နှင့် ချစ်သူများနေ့ ပုံရိပ်တွေ, ချစ်သူများနေ့ နောက်ခံများနှင့် ပျော်ရွှင်ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ စာတို.
Valentine Day ကိုဒါရုံချစ်သူတွေထက်အခြားအဘို့ပွဲကျင်းပရာနေ့ဖြစ်ပါဘူးသငျ့သညျ?
"တကယ်တော့ကျနော်တို့အကောက်ခွန်နှင့်အခင်းအကျင်းအများကြီးအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရ, နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့တစ်သက်တာအတွက်ကိုက်ညီသောမတ်ေတာ၏မျိုး, အများအားဖြင့်အပေါ်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် "အမြဲစုံတွဲများကိုချစ်၏မဟုတျကွောငျး ချစ်သူများနေ့. ဖော်ပြထားတစ်ဦးကစာရေးဆရာ. "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယဉ်ကျေးမှုအရရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝ၏. အထူးသဖြင့်ပေါ့ပ်နဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီမူဘောင်အတွင်းပြည့်စုံစေခြင်းငှါကြောင်းတစ်ခုမျှော်လင့်ထုတ်ပေး. ကျနော်တို့ကတခြားမော်ဒယ်တွေအဘို့အများအားဖြင့်တင်ဆက်, ထိုသို့စျြခွငျးမတ်ေတာ၏အခြားပုံစံများကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိကန်းစေသည်, "Jens W ကကရှင်းပြသည်. Pedersen, ကမတ်ေတာအတှကျရှာဖှေနှင့်အခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်စိတ်ကိုထားပါရန်အရေးကြီးသည်ထင်:"ကဲ့သို့သောမတ်ေတာသညျဝိညာဏတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဘဝကိုယ်နှိုက်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, "မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ
အများစုမှာအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြသူ ပျော်ရွှင် Valentine လက်ဆောင်နေ့က 2018 ဒါကြောင့်သူတို့ကစစ်သားဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာလက်ထပ်ခံရခြင်းမှလူပျိုတို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သောရောမဧကရာဇ်ကလောဒီးယပ် II ကိုအတူပဋိပက္ခ၌ပါသောယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးကြောင်းစဉ်းစား. ယဇ်ပုရောဟိတ်စိန့်. ချစ်သူများနေ့စုံတွဲလက်ထပ်ဖို့ဆက်လက်နောက်ဆုံးတော့ဧကရာဇ်၏တရားကနေသွားဘို့အကွပ်မျက်ခံရခဲ့သည်.
အပေါ်လုပ်ဆောင်ပေးရန်အမှုအရာ မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ 2018 သင့်ရဲ့ချစ်သူများနေ့နဲ့အတူ.
အများဆုံးဆက်ဆံရေးအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းကိုကိုချစ်မြှအကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြောပြရန်အချိန်နှင့်အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်သက်တာခဲလည်းမရှိ. သင်၏မေတ္တာနှင့်ခံစား verbalize ဖို့အချိန်ယူပါ, နှင့်ပေါ်တွင်သင်၏မိန်းကလေးမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးစျြခွငျးမတ်ေတာစာကို compose ပျော်ရွှင် Valentine လက်ဆောင်နေ့က 2018.
shared အတွေ့အကြုံများအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုခညျြနှောငျနှင့်ဆက်ဆံရေး၏အုတ်မြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်. တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲမှလက်မှတ်များနှင့်အတူသူ့ကို / သူမ၏အံ့သြ, ပြဇာတ်ရုံ, အော်ပရာတစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးရုပ်ရှင်.
ဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ပျော်ပွဲစားစောင်ဖြန့်ဝေ, ပျော့ကူနှင့်ကူအများကြီးနေရာ, နှင့်အတူတကွ Tapas အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားခဲဖွယ်စားဖွယ်ပျော်မွေ့. ဆာဗာထိုကဲ့သို့သောငရုတ်သီးအဖြစ်နံ့သာမျိုးနှင့်အတူမွေ့လျော်, ဂျင်း, ကြက်သွန်ဖြူ, vanilla နှင့် Peppermint. သူတို့မှာရှိတယ်, မှောင်မိုက်ချောကလက်နဲ့တူ, အနက်ရောင်ဂျင်း, မြေပဲထောပတ်နှင့်ပျားရည်, အဆိုပါမက်လုံးပေးတိုးမြှင့်ဖို့ကြည်ကြည်. ခရစ်ယာန်နှင့်အတူအမွှေးအကြိုင်တက်, လတ်ဆတ်သောသင်္ဘောသဖန်းသီး, ငှက်ပျောသီး, ခေါ်ဆောင်သွားအသင်းအဖွဲ့များစေနိုငျသောထောပတ်သီးများနှင့်အခြားအခြေအနေများ.
'' ပန်းပွင့်နှင့်အတူကပြောပါ ''. ကြိုတင်သင့်ရဲ့ Valentine သည်များအတွက်ပန်းစည်းရွေးချယ်ရာတွင်ဖို့အပွင့်ရဲ့အရေးပါမှုကို Check 2018.
သူ / သူမအကြိုက်ဆုံး menu ကိုချက်ပြုတ်. ဖယောင်းတိုင်တစ်ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်နှငျ့ရငျးနှီးနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောလေထု Make, ပန်းပွင့်, စားပွဲပေါ်ဂီတနှင့် tablecloth.
ကိုယ်တော်ကို Give / သူမ၏ Foot နှိပ်
ခြေမနှိပ်နယ်ပေးခြင်းနှင့်လာပြီဖွငျ့ရငျးနှီးအထူးသဖြင့်အရာတစ်ခုခုသည်? အဆိုပါခြေချောင်းခဲမတ်ေတာရှိတဲ့အာရုံကို၏ခေါင်းစဉ်များမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဒါကြောင့်ငါတို့ခြေမှကြွလာသောအခါကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောနည်းနည်းကျိုးနွံများမှာဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သို့သော်တစ်ဦးခြေမအနှိပ်, ပူပြင်းတဲ့အစုတခု, မေတ္တာရှင်လက်အား, ခြေ stroking နှင့် massaging, တစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ခံစားခဲ့ရနိုင်ပါသည်. အခြို့သောကောင်းသောရေနံဖြုန်း, လိုအပ်ခဲ့လျှင်နှင့်စောင့်ရှောက်. မိမိအခြေဆစ်များနှင့်တံတောင်ဆစ်ချိုးကိုကျော်တက် Massage.
ပရောပဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအများအပြားဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဆက်ဆံရေးအတွက်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြလျှင်ပင်. ခြေထောက်နှင့်ပရောပမီးပွားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုဖြစ်ပါသည်. ပရောပငျသညျအထံတော်သို့ရေးဆွဲခံစားရကြောင်းကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြောပြရန်anice လမ်းဖြစ်ပါသည် - သင်အမြဲတစ်ခုတည်းစကားလုံးသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်မပါဘဲ.
ချစ်သူများနေ့များအတွက်အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်တွေတည်နေရာမှလင့်များကိုအောက်တွင် Click, ဥပမာ: မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ ပုံရိပ်တွေ, ရုပ်ပုံများ ,မက်ဆေ့ခ်ျ, ပျော်ရွှင်ချစ်သူများနေ့နေ့ ဗီဒီယိုများ, လက်ဆောင်များနှင့်များစွာသောပိုပြီး.
ချစ်သူများနေ့နေ့ Whatspp DP 2018
ချစ်သူများနေ့နေ့ဘယျလို app ကိုအဆင့်အတန်း 2018
ချစ်သူများနေ့နေ့က Facebook Status ကို 2018
Valentine လက်ဆောင်နေ့ကို Facebook အဖုံးဓာတ်ပုံကို 2018
ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ Facebook ကို DP
Valentine လက်ဆောင်နေ့ကို SMS 2018
ချစ်သူများနေ့နေ့ကို SMS ဟိန်ဒီ 2018
ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့အင်္ဂလိပ် SMS ကို 2018
ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ SMS ကို 2018 Girlfriend for
သူငယ်ချင်းများအဘို့အချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ SMS ကို 2018
ခင်ပွန်းဘို့ချစ်သူများနေ့က SMS ကို 2018
ပုံများနှင့်အတူခင်ပွန်းသည် romantic Quotes 2018
ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ရုပ်ပုံကို SMS 2018
မင်္ဂလာ Valentine 's Day ဘင်္ဂလာသို့ SMS 2018
မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ GIF ကိုကာတွန်းကား 2018
မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ Alyce Lyrics 2018
သူ့ကိုသည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
သူမရဲ့သည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
Boyfriend သည်ချစ်သူများနေ့နေ့ကဒ်များ 2018
Girlfriend များအတွက်ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ကတ်များ 2018
မိခင်များနေ့သည်ချစ်သူများနေ့နေ့ Card ကို 2018
ညီအစ်မများအတွက် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကတ်များ 2018
ဥပဒေမှာတော့ညီအစ်မများအတွက် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ
အတန်းဖော်သည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
MOM သည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
ဇနီးသည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
မိဘများအများအတွက် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
မိတ်ဆွေသည် Valentine လက်ဆောင်နေ့ကဒ်များ 2018
Shayari နှင့်အတူချစ်သူများနေ့ Wallpaper 2018
ချစ်သူများနေ့အပတ်စာရင်း 2018,7၏နေ့ရက်များ မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ ရက်စွဲများ:
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့တဦးတည်းခြေလှမ်းနီးကပ်လာသည်မင်္ဂလာချစ်သူများရဲ့နေ့မှရတဲ့နေ 2018! ချစ်သူများနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်အမှတ်တရများ၏တစ်ဦးချင်းစီသည်အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်မြတ်နိုးမှကြီးမှူးမတ်နေသည်. ထိုနောက်တဦးတည်းဝိညာဉျကိုဖွစျလာသူနှစ်ဦးကိုအမည်မသိလူတစ်ဦး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ပူပြင်းတဲ့အမှတ်တရများစောငျ့ရှောကျဖို့တစ်ရက်ဒါဟာင်. Valentine Day ကိုပဲအချို့သောအပိုမေတ္တာတော်ကိုရေချိုးနှငျ့သငျငါတို့သည်ငါတို့၏ mom, နှင့်အဖေကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းသိရအဖြစ်သူသည်သင်၏မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေမသင့်ဘဝကိုစိတ်ကူးမနိုင်တော်မူသောအားဖြင့်လူတစ်ဦးမှရင်ခုန်စရာထက်ပိုထပ်ဆောင်းဖို့ဆင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. Valentine Day ကိုပင်ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ချစ်သူများခံစားနေ့ရက်တိုင်းသုံးဖြုန်းတဲ့သူကစစျမှနျတဲ့ချစ်သူများဘို့ပဲအခြားသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, ဒီချစ်သူများနေ့တစ်နေ့အသစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့မေတ္တာသို့မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာပေမယ့်တစ်သက်တာအတွက်အတူတကွမရနိုငျသောသူတို့အဘို့နေသောသူတို့၏အသက်တာ၏ roughest ရက်အတွင်းသို့မဟုတ်ထိုသူတို့အားခရီးသွားကြလိမ့်မယ်သူနှစ်ဦးအသက်ဝိညာဉ်ကိုအကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာလွှမ်းဖို့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ချစ်သူများနေ့ရဲ့နေ့မေတ္တာ၌နေသောလူတိုငျးအတှကျအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပြီးအရသာမတ်ေတာ၏ငှက်ကလေးရှိပြီး၎င်းတို့၏အထူးသဖြင့်တဦးတည်းကိုသုံးပြီးဘဝဆင်နွှဲချင်.
ကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလချစ်သူများနေ့ရဲ့နေ့ 14 အကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်, ပြီးပြည့်စုံသောအထူးရှိပါတယ်7လည်းများသောအားဖြင့်အတူစတင်သည်ပေးသောချစ်သူများနေ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတပတ်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီတိကျတဲ့ရက်ပေါင်းအဖြစ်လူသိများမေတ္တာတော်ကိုတပတ်ခေါ်ဖေဖော်ဝါရီလ၏တစ်လအတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်ရက်ပေါင်း နှင်းဆီနေ့ ထိုနောက်မှအဆိုပြုရန်နေ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ချောကလက်နေ့ ထိုနောက်မှ Teddy နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနောက်မှပွေ့ဖက် Day ကိုကတိမနေ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်နောက်ဆုံးပေမယ့်အနည်းဆုံးနေ့နဲ့နောက်ဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီးနေ့ကနမ်းမရ Valentine Day ကိုကြွလာ. ဤအနားမလည်ဘူးသောသူတို့အားယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အား7ချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်အချိန်ဇယား၏ရက်ပေါင်း, ထိုသူတို့အဘို့ကျနော်တို့သင့်လျော်သောနိုင်ရန်အတွက်ချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်နေ့ရက်များတစ်ခုအင်အားစိုက်ထုတ်နေ့စွဲစာရွက်လုပ်ပြီးပြီ.
ချစ်သူများနေ့အပတ်စာရင်း 2018 နေ့ရက်များ မင်္ဂလာချစ်သူများနေ့နေ့ ရက်စွဲများ:
ချစ်သူများနေ့ရဲ့အပတ်နေ့ရက်များနေ့စွဲ 20187ချစ်သူများနေ့အပတ်၏နေ့ရက်များ
7ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နှင်းဆီနေ့ (1St ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
8ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (ကြာသပတေးနေ့) နေ့အဆိုပြုရန် (2ကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
9ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (သောကြာနေ့) ချောကလက်နေ့ (3တတိယအကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
10ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (စနေနေ့) Teddy နေ့ (4ကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
11ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (တနင်္ဂနွေ) ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနေ့ (5ကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
12ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (တနင်္လာနေ့) ပွေ့ဖက်နေ့ (6ကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
13ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (အင်္ဂါနေ့) နေ့နမ်း (7ကြိမ်မြောက် ချစ်သူများနေ့၏နေ့)
14ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ချစ်သူများနေ့ (V-နေ့က)
အဆိုပါချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်စာရင်း & သူတို့ရဲ့နေ့စွဲစာရွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရေးပါမှုရှိ. ကျွန်တော်တို့ကိုစာရင်းသည်ဤတစ်ခုလုံးကိုချစ်သူများနေ့ရက်ပေါင်းရက်သတ္တပတ်နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကားစို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒီဆင်နွဲကြပါ7ချစ်သူများနေ့၏ရက်ပေါင်း.
7 ချစ်သူများနေ့၏နေ့ရက်များ & ကျနော်တို့ဒီနေ့ရက်များအကြောင်းသလားဘယ်အရာကို
နှင်းဆီနေ့ 2018: အဆိုပါစုံတွဲအများစုသူတို့ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးင်ရှိမရှိအဘယ်ကြောင့်, ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား, ပေါ်မှာချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ start ခြေတစ်လှမ်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည်7ဖေဖေါ်ဝါရီလ. တစ်ဦးကလှပသောနှင်းဆီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆီသို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပေးထား. အနီရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ရည်ညွှန်းအဖြစ်, ဒါမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်တပတ်ကိုစတငျပါစေ.
နေ့အဆိုပြုရန် 2018: ဒါဟာချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်၏ဒုတိယနေ့နှင့်ဤနေ့၌ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည် 8 လာမယ့်ခြေလှမ်းကတည်းကဖေဖော်ဝါရီလ. အဆိုပါရည်းစားသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း၏သူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အထူးရည်းစားသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဘို့အကြံပြုသောဤနေ့ရက်တွင် & ထူးခြားတဲ့စတိုင်.
ချောကလက်နေ့ 2018: ထို့နောက်ချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်၏နက်ဖြန်နေ့၌ကျင်းပလာ9ဖေဖေါ်ဝါရီလ. သူမကအကြံပြုချက်ကြာပြီးတဲ့နောက်, နက်ဖြန်နေ့၌ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ချောကလက်ပေးကချစ်ခြင်းမေတ္တာ showering အားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်.
Teddy နေ့ 2018: ယင်းပြီးနောက် ချောကလက်နေ့က, သူတို့ရဲ့အပေါ်ကျရောက်ကြောင်းချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်၏စတုတ်ထနေ့ရဲ့ Teddy နေ့ကအဓိကအားထား 10 ဖေဖေါ်ဝါရီလ. ဤသည်နေ့ရက်သည်ဤတစ်ဦးအဖြစ်ဂုဏ်ပြုဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုချစ်စရာ Teddy နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြ.
ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနေ့ 2018: ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနေ့ကအောက်ပါအတိုင်း 11 က V ကို၏ပဉ္စမနေ့အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ. အပတ်ကနှင့်ဤနေ့၌စုံတွဲများအချင်းချင်းသူတို့ရဲ့မတ်ေတာခုထဲက. ယောက်ျားတွေဂတိတော်မျိုးအတွက်ထာဝရအတူတူဖြစ်ကတိပြု.
ပွေ့ဖက်နေ့ 2018: နောက်ပိုင်းမှာကတိပေး, နောက်ပိုင်းတွင်ချစ်သူများရက်သတ္တပတ်၏ဆဌမနေ့ဖြစ်သည့်ဖက်နေ့ကလာ 12 ဖေဖေါ်ဝါရီလ. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်, စုံတွဲများတင်းကျပ်စွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
နေ့နမ်း 2018: ဤနေရာတွင်ပေါ်နမ်းနေ့ 13 ချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်၏နေ့သတ္တမင်ကြောင့်ဤနေ့ကိုအကောင်းဆုံးနေ့ကသင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးနမ်းတောင်းဆိုနိုင်သည်ကတည်းကကြောင်းပေါ်လာဖေဖော်ဝါရီလ, သင်ရုံသူမ၏အဆိုပြုလျှင်.
မင်္ဂလာ Valentine Day ကို 2018: နောက်ဆုံးမှာသိသာထင်ရှားသောနေ့၌ရောက်ရှိ 14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ. ဒါဟာချစ်သူများအားလုံးအတှကျအကောငျးဆုံးကိုအများဆုံးထူးခြားတဲ့နေ့, ချစ်သူများနေ့နေ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကမေတ္တာနှင့်၎င်းတို့၏စစ်မှန်ပုံစံဖော်ပြတစ်ဦးချင်းစီသည်တဦးတည်းကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်စုံတွဲများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်.
တစ်ပတ်လုံးကိုခစျြ showering ပြီးနောက်ထို့နောက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမေတ္တာ၌မယုံသူတွေကိုသို့မဟုတ်၏ပျော်စရာလုပ်သူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမှကြွလာ ချစ်သူများနေ့ ရဲ့အများအားဖြင့်တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ချစ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ချစ်သူများနေ့အဖြစ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝင်စားကြဘူးသူကလူများ၏ဆန့်ကျင်ရောင်ရမ်းများမှာ, အဆိုပါနောက်တော်သို့လိုက်ရက်သတ္တပတ်ဆန့်ကျင်ချစ်သူများနေ့တပတ်သို့မဟုတ်ပင်ရယ်စရာ Valentine လက်ဆောင်ရက်ပေါင်းခေါင်းစဉ်အဖြစ်ကျော်ကြား.
အံ့သြဘွယ်ကောင်းသော / ဆန့်ကျင်ချစ်သူများနေ့ နေ့ရက်များ
ဆန့်ကျင်ချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်နေ့နေ့စွဲ ဆန့်ကျင်ချစ်သူများရဲ့နေ့အပတ်စာရင်း 2018 ဆန့်ကျင်ချစ်သူများနေ့၏နေ့ရက်များ
15ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 ရိုက်ပုတ်နေ့ ကြာသပတေးနေ့
16ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 နေ့ Kick သောကြာနေ့
17ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 ရေမွှေးနေ့ စနေနေ့
18ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 ပရောပနေ့ တနင်္ဂနွေ
19ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 ဝန်ခံနေ့ တနင်္လာနေ့
20ကြိမ်မြောက် ဖေဖော်ဝါရီ 2018 ပျောက်ဆုံးနေနေ့ အင်္ဂါနေ့
21St ဖေဖော်ဝါရီ 2018 လူစုခွဲသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Anti-ချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခု7ပြီးနောက်နေ့ရက်များ ချစ်သူများနေ့ 15 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်နေ့ကပါးရိုက်ခဲ့ကြ, 16thFebruary အပေါ်ကန်နေ့က, 17 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်ရေမွှေးနေ့က, 18 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်နေ့ကပရောပရည်, 19 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်ဝန်ခံနေ့က, 20th ဖေဖော်ဝါရီလပေါ်နှင့် 21 ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးချိုးမှာပျောက်ဆုံးနေ့က.
ချစ်သူများနေ့ ကမ္ဘာကြီးကိုမှတဆင့်ကျော်လူသိများသည် 14 ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်စဉ်. ချစ်သူများနေ့ မေတ္တာတော်၌တည်ခဲ့ကြသူလူတိုင်းအားဖြင့်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်နေ့ရက်သည်အဓိကအားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အတူလူငယ်တဦးတည်းကျော်ကြား, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု. Valentine လက်ဆောင်အပတ် 14 ဖေဖော်ဝါရီလမကုန်မှီတိုင်အောင် 7th ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စတင်သည်. ချစ်သူများနေ့အပတ်၏နေ့ရက်တိုင်းတိုင်းစိတ်ကူးထုံးစံအတွက်ချစ်သူများနေ့အပတ်ထူးခြားတဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့ခွဲခြားခံရဖို့အထူးအဖြစ်အပျက်ကိုယ်စားပြုအထူးလမ်းအတွက်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်. မေတ္တာ၌နေသောသူအပေါင်းတို့လူတို့သည်မိမိတို့ချစ်ရသူအထင်ကြီးသူတို့ကိုထူးခြားတဲ့ခံစားမိစေရန်ဤသည်နေ့ရက်သည်စောင့်ဆိုင်း.
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်ချစ်သူများနေဖြင့်အမှန်တကယ်အရှိဆုံးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနေ့ဖြစ်သောချစ်သူများရဲ့နေ့လာရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်နေ့ရက်သူတို့အရူးအမူး၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်ခုချင်းစီစိတ်အားထက်သန်စွာယနေ့တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. အကြမ်းအားဖြင့် 14 ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်စဉ်တစ်ဦး Valentine ရဲ့ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းချစ်သူများရဲ့နေ့. ချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ် 2018 7th Feb ထံမှစတင်. 7th ကနေ 14 မှယခုအပတ်တွင်လည်းမေတ္တာတော်ကိုတပတ်သို့မဟုတ်မေတ္တာရက်သတ္တပတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်စာရွက်တိုးမြှင့တစ်ရက်နှင့်အတူစတင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 7th ဖေဖော်ဝါရီထဲကစတင်သည်. အောက်တွင် Valentine လက်ဆောင်သီတင်းပတ်ကာလ၏အပြည့်အဝစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည် 2018.
နှင်းဆီနေ့က အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်သစ်တောများပေးထားပါသည်. တောင်မှသူတို့အမေတ္တာတော်ကိုကမျးလှမျးခကျြအနီအတွက်လာမိမိတို့ချစ်ရသူမှထ. ၎င်း၏ရုံဤသည်နေ့ရက်မှသာမိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့အထင်နေသည်မဟုတ်. ဤသည်နေ့ရက်သည်လည်းသူငယ်ချင်းများကိုကြားတွင်ထင်နေသည်. တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကဤသူအပေါင်းတို့ကိုအရောင်တိုးလာနဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်တည်ရှိသည်. ဒါဟာ 7th ဖေဖော်ဝါရီအပေါ်ကျရောက်နှင့်အကြမ်းအားဖြင့် 2018 ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျသွားမယ့်.
ချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူစတင် နှင်းဆီနေ့, ပွင့်ကျိန်းသေသည့်အကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ကို item ဖြစ်နှင့်ဆက်ဆက်သူတို့အားနှင်းဆီပန်းအကြားမယ်လို့အဖြစ်တိုင်းလူတစ်ဦး၏သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြားနေဆဲ. နှင်းဆီနေ့ ရိုးရှင်းစွာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဇွဲနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သူတို့၏အချစ်ဆိုလိုရန်ကြိုးစားသောကလေးတွေတများများနှင့်အတူကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးမေတ္တာတစ်ဦးတိုးချဲ့နှင့်ဆုကြေးဇူးကို အသုံးပြု. ကွိုတငျပွငျဆငျ.
ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အတူကသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးသောလူများအနီရောင်အဝါရောင်ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ့်. ပန်းပွင့်ခြောဒီနှင်းဆီပန်းအတွင်းပါရှိသောအကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံးချစ်သူတို့ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်ရုံတစျခုကဤအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြ၏.
သင်သည်သင်၏အရူးအမူးချဉ်းကပ်နှငျ့သငျဖြောင့်သောသူတို့အဘို့ယုံကြည်အတိအကျဘာကသူတို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်နေ့ကအဆိုပြုရန်တွင်. သင်သည်သင်၏ချစ်ရသူမှညွှန်ပြ. ဒါဟာနေ့ကတပတ်ဖို့ v နေ့၏ 2nd နေ့ကဖွင့်. အဆိုပြုချက်ကိုစိတျထဲတှငျလက်ဆောင်နှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်တည်နေရာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်အထူးဖန်တီးထားရမည်. သင်ကလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကို Make ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်ဒီကအရေးကြီးတယ်
သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဒူးနေဖို့လည်းလှပခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောပတ်ဝန်းကျင်စီစဉ်နှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ရသူအကြံပြု. ဒါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ချစ်ရသူညွှန်ပြရန်မကြိုတင်သတ်မှတ်ထားနည်းလမ်းင်. တစ်စုံတစ်ယောက်များအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှန်ကိစ္စတွင်ပြီးတော့သူတို့ကိုသင်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်မူထူးခြားတဲ့ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်. အဘယ်အရာကိုမျှအလွန်မတ်ေတာရှိသောဝိညာဉျကိုနှိုင်းယှဉ်တာပိုအရေးကြီးတယ်, မဟုတ်လား.
နှင်းဆီနေ့ နေ့အဆိုပြုရန်နေဖြင့်နီးကပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့ဒီချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်၏ 2nd နေ့ကဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အတူ, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်လိမ့်မည်သဘောထားကိုသင်၏မေတ္တာနှင့် himor သူမ၏ဆီသို့ဦးတည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြ. ဒါကြောင့်ဒီအဆိုပြုရန်နေ့အဘို့တစ်ဦးမေတ္တာကိုတင်ပြမယ့်အသစ်စက်စက်အံ့အားသင့်စရာနှင့်အတူကွိုတငျပွငျဆငျ.
ကင်ဒါမှမဟုတ်တချို့သည်အခြားသကြားလုံးအချိုပွဲကြောက်မက်ဘွယ်သောစိတ်နေသဘောထားနှင့်အတူသှေးဆောငျ enriches. ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်အကြိုက်ဆုံးချောကလက်တင်ပြခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုလူစုခွဲခြင်းနှင့် himor သူမ၏အထင်ကြီးစေမည်.
တခြားလူတိုင်းအဖြစ်မကြာမီကချောကလက်၏ရှေးခယျြမှုမှကြွလာအဖြစ်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောအရသာရှိပါတယ်. သငျသညျအခြို့သောမှချောကလက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခါတိုင်းသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းချောကလက်ပေးရသူမြားကိုက၎င်း၏အကောင်းဆုံးချစ်ကြောင်းကိုသိထား. ဘယ်လောက်အားဖြင့်, သင်သည်သင်၏လေးရယ်ရန်သင့်စိတ်ခံစားမှုဟုမဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်အကြံပြုမယ်ဆိုရင်, နောက်ပိုင်းတွင် ချောကလက်နေ့က ကြောင်းအောင်မြင်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့.
အဆိုပါ ချောကလက်နေ့က ချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်၏အစကသောကြာနေ့အပေါ်သို့ကျသွားမယ့်9ကြိမ်မြောက်ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်ကျော်ကြား 2018.
သင်တစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနီးနှင့်ချစ်ရသူသို့ချောကလက်ပေးခြင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြန့်ဖြူးစေခြင်းငှါ. အချို့အပြင်ကအစီအစဉ်၏လက်ဆောင်များနှင့်အတူအထူးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ shaped ချောကလက်အတူတကွများကိုဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့သူမြားကိုရည်းစားကိုခစျြသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ချစ်သူ grandparents.
မင်္ဂလာ Teddy နေ့ 2018:
Teddy နေ့ကအကြောင်းတီထွင်သူဆုကြေးဇူးကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးချစ်စရာ Teddy. မိန်းကလေးများကစားစရာတကယ်ဝေးပိုကောင်းသည်ဤပစ္စည်းများကိုကိုချစ်. S ကအိုချောကလက်၏အနည်းငယ်ချိုအောက်ပါ, ထို့နောက်တစ်ဦး Teddy gifting သင့်ရဲ့မိန်းကလေးတစ်ပင်အများကြီးပိုပြီးပျော်ရွှင်စေမည်.
အဆိုပါ Teddy နေ့က 10 ဖေဖော်ဝါရီလအကြောင်းကိုကျော်ကြားပေါင်းအထဲတွင်စနေနေ့ကလျော့ကျလာနေပါတယ် 2018.
Teddy ချစ်သောတစ်ဦးချင်းစီမှပေးထားသောခံရဖို့ကိုအများဆုံးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောဆုကြေးဇူးကိုဖွစျလိမျ့မညျ. ကျနော်တို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုလွဲချော်သည့်အခါသူတို့ကရံဖန်ရံခါ cuddled နေကြတယ်. ကျနော်တို့အမျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးလည်းငါတို့သည်ဤအကြောင်းကိုငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထဲကကြွေးကြော်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံပေါ်တက်ထိမှန်နေကြ.
ပျော်ရွှင် Teddy နေ့က 2018
Teddy နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, ဤသည်နေ့ရက်သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မေတ္တာတော်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အားလုံးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောနှင့်ချစ်စရာ Teddy နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတင်ပြ. ကျနော်တို့ကချစ်ရာသခင်သည်တစ်ဦးချင်းစီမှချီးမြှင့်ခံရဖို့အများကြီး cutest လက်ဆောင်တစ်ခုအကြားတဦးတည်းမိန်းကလေးငယ်များဝက်ဝံရုပ်နှင့် Teddy ဖို့အတော်လေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအားလုံးသတိထားမိဖြစ်ကြ၏. အခုတော့ကချစ်သူများနေ့ကနေ Teddy အပေါ်ရေတွက်ဖို့အံ့သြဖွယ်နေ့ကလက်ခံရရှိရန်အချိန်.
သူတို့ဟာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမှကတိတော်များကိုထုတ်ပေးနှင့်မျှမကိစ္စအရာအားလုံးအကြောင်းကိုလာဟာသူတို့ရဲ့ကတိတော်များများအတွက်လှည်ရပ်တည်ချက်ကြိုးစားကြ. ဤအကြားဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုင်ထိုက်သောအဘို့ဖြစ်. အဲဒီအဖြစ်မကြာမီချစ်ရသူတစ်ယောက်အသွားအလာမျှော်လင့်စတင်ဖို့နှင့်တစ်ယောက်အသွားအလာအပျေါမှီခိုစတင်ရန်တစ်ချိန်ကကဲ့သို့ဖြစ်၏. သူတို့ကပြီးပြည့်စုံသောအပျနှံဆည်းပူးဖို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသွားအလာကတိပေး. သူတို့ကအခြေအနေကြောင်းကိုမသက်ဆိုင်ဘဲမူလဘယ်လောက်ဆိုးရွား၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလက်ဖြင့်နေဖို့ကတိပေး.
ကတိတော်များကိုအင်အားစိုက်ထုတ်သော်လည်းထိုဂတိတော်များကိုစောင့်ရှောက်ပြုလုပ်ခြင်းခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဤဇာတ်သိမ်းမတိုင်မီ၎င်းတို့၏ကတိတော်များကိုထိန်းသိမ်းရန်လျှင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပါသည်, နှင့်လည်းမိမိတို့၏ဂတိတော်ကိုပြီးစီးခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သောကြိုးပမ်းမှုအောင်. တစ်ဦးကသာယာဝပြောတဲ့ကွန်နက်ရှင်ရှေးရှေးမိမိတို့၏တွဲဖက်အတွက်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဆိုတဲ့အချက်ကိုသည်နှင့်အမှုအရာမှထွက်ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်, သို့ရာတွင်, ထို့အပြင်ကြိုးပမ်းမှုအမှန်တကယ်နှစ်ဖက်စလုံးကနေဖြစ်ရမည်.
ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနေ့ 11 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်သို့ကျရောက်. ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းတဲ့အကြိုးပွုဆက်ဆံရေးမျိုးရရန်သင့် 2nd အရေးအပါဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ကြီးမားတဲ့ကတိတော်များကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးမျိုးသတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပြုလုပ်ခြင်းသော်လည်းပြင်းထန်သောအပျနှံနှင့်အတူဤအပြည့်စုံနှင့်လည်းယုံကြည်မှု variable ကို Resident စောင့်ရှောက်ခြင်းအရေးကြီးသည်. ထို့ကြောင့်အများကြီးမယုံကြည်ကြဘူးများနှင့်ရှေ့မတက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့်တစ်ဦးမေတ္တာကတိပေး, သငျသညျအပျနှံကိုပြသနှင့်သူတို့၏အသက်တာ၏ကြာချိန်တစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားရှိမည်ဖြစ်သည်.
ကတိတော်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖန်တီးရန်လွယ်ကူပေမယ့်ခက်ခဲ. သို့သော်ကျနော်တို့ဝင်ငွေကတိတော်များ၏ဧရိယာ၌တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုကြှနျတျောတို့၏မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်ဖော်ပြမှာအသုံးဝင်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကတိပေးမှအများကြီးပိုကောင်းဒါဟာင်. ဒါပေမဲ့, ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောတစ်ရက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနေ့တိုင်းချစ်သူများနေ့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်နေ့ရက်ကာလ၌ရှိရဲ့. ထို့ကြောင့်ဤကတိတျောနေ့ကကတိတော်များကိုဖန်တီးသို့သော်သင့်ရဲ့ connection ကို Hardy စေရန်ကြိုတင်သူတွေနဲ့အတူဖြည့်ဆည်းကြဘူး.
သင့်ရဲ့ရငျးနှီးနှင့်ချစ်ရသူပွေ့ဖက်ခြင်းအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပွေ့ဖက်နေ့ကဟောပြောပွဲ . ဒါကြောင့်ပဲတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့နေ့တက်အလှဆင်ရန်နိုင်ကြောင်းပွေ့ဖက်ဖြစ်သကဲ့သို့ရိုးရိုးသူတွေကိုကိုချစ်၏မဟုတ်.
နေ့တိုင်း 12 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်သို့ကျရောက်သောဤလူငယ်အတော်များများညျ့အဝမှဤနေ့အတွက်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်. ဤသည်နေ့ရက်သည်ထောက်ပံ့ငွေတဦးတည်းနှင့်တစ်ဦးတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနှင့်နွေးထွေးသောနမ်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှပြောတန်ဖိုးရှိသောအခွင့်အလမ်း.
ပွေ့ဖက်တစ်ရက်ပတ်လည်ရှိမိတ်ဖက်တစ်ယောက်အသွားအလာထောက်ခံအားပေးတာ. သူတို့ကအပန်းဖြေသူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလက်မောင်း. သူတို့ကဒီခြွင်းချက်ယခုအချိန်တွင်ယုံကြည်အဆိုပါနွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့သည်မိမိတို့အသက်တာ၌၎င်း၏အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်လျှင်ဒီတော့သူတို့ကယ့်ကိုတစ်ယောက်အသွားအလာစွန့်ခွာရန်အဘယ်အရာကိုမတစ်ယောက်အသွားအလာဒါတင်းကျပ်စွာခြုံ.
တဦးတည်းပွေ့ဖက်သို့ရာတွင်အခြားနှစ်သိမ့်ပေးသည်, မေတ္တာတိုးပွားစေ. ယင်း၏မသာနှစ်ဆယ်ငါးခုနေ့ကရည်. သင့်ရဲ့ချစ်ရသူမပျော်ဖြစ်ကြပြီးတာနဲ့, ရိုးရှင်းစွာသူတို့ကိုကိုင်နှင့်သူတို့တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနမ်းပေး. ဒါဟာဧကန်အမှန်အဝေးပိုကောင်းခံစားရရန်သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမယ့်. ပွေ့ဖက်သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခံစားမှုပေးစွမ်းသည်. ဒါဟာငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတယ်ကြောင်းပညာပေး. ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုထားပါတယ်. ထိုသို့ပြသ, သို့ရာတွင်လှည်သည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါသည်, '' သင်အမြဲငါ့ကျောရမယ့် ''.
Kiss Day ကိုဖေဖော်ဝါရီလ 13 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, ဒီ Valentine လက်ဆောင်ရက်သတ္တပတ်၏ပြင်အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်နေ့၏တဦးတည်းအကြားတစျခုဖွစျသညျ. ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အတူချစ်သူများသင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ချစ်သူများနေ့ဖို့အသည်းအသန်နမ်းပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝေမျှဖို့ရွှေအခွင့်အလမ်းရ. အထူးသဖြင့်နဖူးပေါ် Kiss ကယ့်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိဖြစ်ခြင်း၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်. တစ်ဦးရငျးနှီးနှင့်အမှတ်ရစရာများထဲမှသို့ဤသည်နေ့ရက်ပြောင်းလဲစျြခွငျးမတ်ေတာ၏ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစကားရပ်ထွက်ကြိုးစားပါ.
နမ်းနေ့၌မိတ်ဖက်တစ်ယောက်အသွားအလာနမ်း. ဤသည်နေ့ရက်သည်၎င်းတို့၏အမြင်၌အဖြစ်ကောင်းအလွန်ထင်ရှားတဲ့နေ့ရက်ကိုခဲ့ပြီ. ကြောင်းတိကျတဲ့နေ့ရက်ကိုအောက်မေ့. နမ်းသင့်ရဲ့ချစ်ရသူ love.Kissing ကြီးမြတ်နှငျ့ညီညှတျခံစားမှုပေးသည်ဟုပြောရန်သင့်အများဆုံးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအမူအရာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ထူးခြားသည်, အရှင် ပို. ပင်ထူးခြားသောယင်းချစ်ရသူမှဤနေ့ရ.
နမ်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသဟုအရှိဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလက်ထက်သောင်းချီနည်းလမ်းတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏မေတ္တာဆိုဖြစ်နိုင်သောဒါဟာင်, စကားရပ်များအလွန်အကောင်းဆုံးမျိုးနမ်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျခရစ္စမတ်နမ်းတူသောအပါအဝင်နမ်း၏ထူးခြားသောအမြိုးမြိုးတှေ့ရလိမ့်မယ်, နှုတ်ခမ်းနမ်းဖို့နှုတ်ခမ်း, နဖူးပေါ်နမ်း.
နောက်ဆုံးပေမယ့်သေချာပေါက်အနည်းငယ်မျှသာမဟုတ် Valentine Day ကိုဖေဖော်ဝါရီလ 14 အပေါ်သို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, ဒီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသူများကလူအတော်များများများအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအရှိဆုံးအထူးနေ့၏တဦးတည်းအကြားတစျခုဖွစျသညျ, အများဆုံးအသက်အရွယ်အတန်းကလူကိုခေါ်ဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ကဆင်နွှဲ ချစ်သူများနေ့.
ဒါကြောင့်မျှဝေဖို့သိပ်နောက်ကျသည်အထိ "သင်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုမချစ်ပဲဘယ်လောက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့ဟုတစ်အကြိုက်ဆုံးမျှသာရှိပါသည်, ဘယ်လောက်သင်အမှန်တကယ်ကဤမှဂရုမစိုက်. သူတို့သို့သော်ကျယ်လောင်စွာသငျသညျအကြီးတွေကများနှင့်ကြွေးကြော်သွားကြပြီကတည်းက, သူတို့ဆိုပိုရှည်သငျသညျနားမထောငျပါလိမ့်မယ်။ "ဒီနေ့ကအများအပြားအနည်းငယ်သကျတမျးအတွက်အရေးပါပုံကိုများများရရှိထားသူ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်တဦးတည်းနှင့်အတူဤတစ်ခုလုံးကိုနေ့ကမြှုပ်နှံထား, အဘို့အသွား mealsand ရုပ်ရှင်ကိုချစ်ပြီးတာရှညျစီးဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့်ဤနေ့ရက်သည်အမှတ်ရစရာတဦးတည်းဖန်တီး.
မည်သည့်လူစိမ်းခံစားမှုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်မျှမဖွင့်. ကနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဘယ်တော့မှမ. စင်ကြယ်သောဝိညာဉျသထံမှချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်. ကတိကဝတ်ကိုရှာပါ, ယုံကြည်မှုရဖို့, သင်၏မေတ္တာဖော်ပြ.
သငျသညျထိုလူအပေါင်းတို့သည်မပြည့်စုံအချို့မမှန်ကန်ကြောင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးအဖြစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမုန်းစတင်ဖွင့်သောသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျဤကဲ့သို့သောဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျသငျ့သညျ, ထို့နောက်သူတို့အချိန်ပေး, သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိ, ထို့နောက်မေတ္တာ၌ယုံကြည်ကိုးစားဆည်းပူးဖို့သူတို့ကိုခွင့်ပြု, သူတို့ကိုဖန်တီးလူတိုင်းအတိအကျအတိအကျတူညီမယ့်နားလည်. သငျသညျ youpersonally ၌မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးစားရာရရှိမှုအတွက်အောင်မြင်မှုနားလည်သဘောပေါက်သောအခိုက်, ထို့နောက်သင်သည်သူတို့၏အမာခံချိုးဖောက်ဘယ်တော့မှအချို့ဖြစ်. သူတို့ကိုအရာအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်မနေပါနဲ့, သာဒီအသင်၏မေတ္တာမှအောင်ပွဲငါပေးမည်အဖြစ်သူတို့ကိုနားမလည်ကြိုးစား.
''ချစ်သူများနေ့'' မေတ္တာ၌ယောက်ျားမိန်းမတို့အဘို့တစ်ကယ့်ကိုအထူးနေ့. သငျသညျအကြံပြုသောတဦးတည်းကသင်၏အဆိုပြုကြာလျှင်သင်ဖို့အလွန်အထူးသဖြင့်တစ်နေ့လျှင်သို့လှည့်. သင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အခါတစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်လျှင်သင်ဒါမှပျော်ရွှင်ခဲ့ချင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကထိုနောက်မှဖြစ်လျှင်ဤနေ့ရက်ကိုသတိရ. တစ်ဦးချင်းစီသည်စပ်လျဉ်းရှိပါတယ်အတက်အကျ, တိုက်ပွဲတွေလည်း, မျက်ရည်, နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း, စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း, ထကြွခြင်း, စိတ်ကျ. သို့သော်နေဆဲကြိုးစားနေကိုရပ်တန့်မပေး. တသမတ်တည်းရှိအပြင်ဘက်အမှုအရာကိုရှာဖွေရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေဖို့လုပျ. ဒါဟာအမြဲသငျ့ဆကျဆံရေးအားကောင်းလုံခြုံခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
အကယ်. ဝမ်းနည်းစရာ, အမှု၌သင်တို့ကိုအဆိုပြုမှာငြင်းပယ်ခံရထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, ထို့နောက်အမျက်ထွက်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်. လူတိုင်းရွေးချယ်ရေးသူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်. သင်တို့သည်ဤအသာသင့်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံဖို့ခွင့်ပြုပါရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ရရှိပါသည်, သို့ရာတွင်သူတို့ရိုးရိုးလွှတ်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့မလေ့.
အထက်ဆောင်းပါးမှာတော့, ငါတို့သည်သင်တို့ချစ်သူများနေ့အပတ်ကအကြောင်းကိုပြည့်စုံအချက်အလက်ကိုပေး 2018 ချစ်သူများနေ့ရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးနေ့၏ပြီးပြည့်စုံသောအဓိပ်ပာယျနှငျ့အတူ. ငါတို့သည်လည်းနေ့တိုင်းပုံရိပ်တွေများအတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သော link ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြ, စိတ်ကူးယဉ်, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်, စာတို. သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုပျော်မွေ့ခဲ့လျှင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေခံစားပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး ချစ်သူများနေ့ 2018 မေတ္တာနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူ.
"မည်သူမဆိုအချိန်အကြောင်းမရှိသင်သည်ထိုသူတို့ကိုချစ်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုအကြောင်းကြားဖို့စံပြအချိန်စောင့်ဆိုင်းဘယ်တော့မှတစ်ခုအံ့သြဖွယ်စကားရပ်နှင့်အတူဤလှပသော post ကိုအဆုံးသတ်ခြင်း, ။ အခုလုပ် "ဒါကြောင့်ဒီ Valentine Day ကိုသင်သည်ဤအဘို့အရရှိပါသည်သင့်ရဲ့လေးနက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆွေးနွေးရန်နိုင်စွမ်းပေးခွင့်ပြုပါ 1 သငျသညျမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရပါဘူးယုံကြည်သူအဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတဦး. အလွန်မင်္ဂလာ Valentine Day ကိုလူတိုင်းလို 2018 ကြိုတင်မဲနှင့်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုတွေ့သည်ဟုမျှော်လင့်! ပိုပြီးမွမ်းမံမှုများအတွက်, အဆက်အသွယ်မပြတ်!